Oku nke Ọchịchịrị Na Lords Mobile ❤️ 2021
Lords Mobile bụ egwuregwu na-enye anyị ohere ịnwe ihe ịma aka site n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike itinye n'ọrụ anyị nkà nhazi iji gafee usoro nke nsogbu na ọrụ na ụzọ na-enye afọ ojuju.
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ụdị mmemme nke so na enweghi nsogbu. Ihe ndị a bụ ihe omume pụrụ iche nke na-eme ụbọchị asaa na ebe ndị egwuregwu gwụchara pụrụ iche nkebi Kwa ihe ịma aka iji merie akara na ụgwọ ọrụ.
Lords Mobile Oku nke ochichiri
Agbanyeghị, taa, anyị ga-atụle otu n'ime nsogbu ndị a ka ama ama Oku nke ochichiri. Ọ bụrụ na tupu ị gụọ isiokwu a, ị ga-ahọrọ ịmatakwu banyere obere nsogbu, a na m akpọ gị oku ka ị mee ihe ndị a ederede dị ịtụnanya.
Etu esi egwu na Oku nke Ọchịchịrị?
Dị ka anyị kwuru na mbụ, oku nke ochichiri ọ bụ otu n'ime nsogbu dị iche iche anyị nwere ike igwu egwu maka ụbọchị asaa mgbe enwere nsogbu a dị oke.
Ọ bụ ihe omume pụrụ iche, ya mere na ọ bụghị mgbe niile na ị ga-abụ nnọọ maara nke ụbọchị nke ọ dị iji na-enwe ike na-egwu n'ụzọ, na-echeta na otu onye kwa ụbọchị na-apụta.
Site n'inwe obere ihe ịma aka a nke nwere aha oku nke ochichiri, anyị nwere ohere iji nweta dị iche iche ichekwa nrite dị ka frasi na anyị na-egwu na o doro anya na ọ bụ ihe ịga nke ọma.
Kedu usoro ndị dike iji mee ihe na usoro?
Mgbe ụfọdụ okwu banyere ịmara ndị dike ị ga-eji mee ihe ịma aka ndị a iji merie nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Ya mere, anyị ga-ahapụ gị ndepụta site na usoro na ndị dike nwere ike inyere gị aka imeri.
Ekwesiri iburu n'uche na n'ime uzo obula a, anyi gha etinye ya Jonas, makwaara dị ka Onye na-eso Ọchịchịrị, n'ihi na ọ bụ onye isi dike maka nsogbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Jonas ị nwere ike ịga na ndị na-esonụ ederede.
N'ịga n'ihu na isiokwu ahụ, ana m eweta n'okpuru a ndị dike kwụ n'ahịrị na anyị nwere ike ikwu kwa frasi:
Prima Donna, Knight nke Ọnwụ, Tracker, Nwa nke Ìhè.
Nwa nke Ìhè, Prima Donna, Knight nke Rose, Tracker.
Acha uhie uhie, Prima Donna, Nwa nke Ìhè, Knight nke Rose.
Prima Donna, Knight nke ọnwụ, Nwa nke ìhè.
Nwa nke ìhè, Prima Donna, Knight nke Rose.
Tracker, Prima Donna, Nwa nke Ìhè.
Prima Donna, Ọnwụ Knight, Tracker.
Knight nke ọnwụ, Prima Donna, Nwa nke ìhè.
Prima Donna, Ọnwụ Knight, Beatrix.
Knight nke Rose, Prima Donna, Nwa nke ìhè.
Prima Donna, Knight nke Ọnwụ, Knight nke Rose.
Prima Donna, Knight nke Rose, Tracker.
Knight Ọnwụ, Prima Donna, Tracker.
Prima Donna, Nwa nke Ìhè, Knight nke Rose.
Knight nke ọnwụ, Knight nke Rose.
Tracker, Ọnwụ Ọnwụ.
Knight nke Rose, Onye nche nke ọhịa.
Oku nke Ọchịchịrị - Nzọụkwụ
Phafọdụ ụzọ na mgbakwunye na ịnwe dike na-akpaghị aka, dabere na ọnụọgụ oge, weta ndị dike ndị ọzọ ekenyela, dịka ọmụmaatụ na mpaghara 6 enwere ndị na-ekenye onye nlekọta, n'ihi nke ahụ, ahọpụtaghị onye ọzọ, dị ka Prima Donna.
Chetakwa na site na imeri nnukwu anụ nke akụkụ ọ bụla ma nwee mmeri, ị meriri dike. Ọzọkwa, mgbe ị mechara ụzọ niile nke ihe ịma aka, ị ga-enwe nhọrọ iwe n'ọrụ Jonas, ya mere, ọ bụ ụzọ iji nweta ya.
Otu esi eji Ntughari Brawl Stars